COMBINATION No comments
Zawgyi Magisk modules !!!
မြန်မာဖော့င် No comments
Magisk boot နဲ့ root ပြီး system font မချိန်းချင်ပဲ boot ထဲမှာတင် Font ထည့်ဖို့ Zawgyi Magisk modules လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
1.Magisk ကိုဖွင့်ပြီး အချောင်းသုံးချောင်းနှိပ်ပါ > Modules ကိုသွားပါ
2. အောက်က (+) ကိုနှိပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ zip ဖိုင်ရွေးပေးလိုက်ပါ
3. ဖုန်းကို reboot ချပါ done !!!
Window 10, Window 8, မြန်မာ Font Installer No comments
TTA အတန်းခွဲ အမှတ်စဉ် (၁၁) သင်တန်း ကို ၉ လပိုင်း (၁၁) ရက်နေ့ ၂၀၁၈ မှာစပါမယ်
အတန်းခွဲ အမှတ်စဉ် (၁၁) သင်တန်း ကို ၉ လပိုင်း (၁၁) ရက်နေ့ ၂၀၁၈ မှာစပါမယ်
မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲ အခြေခံကနေစပြီး သင်ကြားမယ့် (၁)လ သင်တန်းကို
Than Toe Aung Mobile Phone Services & Training Mandalay​ မှ
အခြေခံ CPU အကြောင်းများရှင်းလင်းခြင်း
သင်ရိုးကို Phone Model မသင်ကြားပဲ
Theory ကိုဦးစားပေးပြီး သင်ကြားခြင်း
FRP , Mi Account Lock , userlock ect.. လော့အမျိုးမျိုးဖြေခြင်း
dead နေသောဖုန်းများအား dead နှိုးခြင်း
အင်တာနက် အကောင့် နှင့် Download ပိုင်ဆိုင်ရာ
Firmware များ tool များ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်း
အကောင့်ဖွင့်ခြင်းများ Solution ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်း
Windows တင်ခြင်းနှင့် Computer Windows
အကြောင်းသေချာရှင်းပြခြင်း Driver Error များ
Fix လုပ်ခြင်း Virus ကာကွယ်ခြင်း
Windows ကိုဆရာကျကျ အသုံးပြုခြင်းများ
Qualcomm CPU သုံးဘယ်ဖုန်းမဆို လိုင်း (Network)
Fix ခြင်း Firmware တင်ခြင်း Firmware backup ထုတ်ခြင်း
ပြန်သွင်းခြင်း Block0 backup restore လုပ်ခြင်း
emmc အလွတ်ကပ်ပြီးစက်နှိုးခြင်း ect...
MTK CPU သုံးဘယ်ဖုန်းမဆို လိုင်း (Network)
ပြန်သွင်းခြင်း IMEI ရေးခြင်း , Dead မဖြစ်အောင် ကာကွယ်
နည်းများ , Dead သွားလျှင် ပြန်လည်ကယ်ဆယ်ခြင်း
Spreadtrum ဖုန်းများ Firmware ရေးခြင်း
Firmware backup ထုတ်ခြင်း IMEI ပြန်ရေးခြင်း
Clone ဖုန်းများနှင့် အမျိုးအမည်မသိ tablet များ
Model အမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မ dead အောင်
ကာကွယ်ရှောင်ရှားနည်း Deadfix ခြင်းနှင့်
Firmware တင်ခြင်းများ ect...
ဘယ် Android ဖုန်းမဆို Root ဖောက်နည်းများ
Root မလိုပဲ မြန်မာစာရအောင်လုပ်ခြင်း
Phone Partition များအလုပ်လုပ်ပုံနှင့်
Userdata မပျက်အောင် lock ဖျက်နည်းများ
bootloader unlock လုပ်နည်းများနှင့်
custom recovery , stock recovery
custom roms , custom rom zip
root zip ect... flash နည်းများ
box crack , dongle crack အသုံးပြုနည်းများ
နှင့် box , dongle လမ်းညွှန်
SAMSUNG Firmware အမှန်ဒေါင်းနည်း
မြန်မာစာ built in ပါသော Firmware တည်ဆောက်နည်း
model နှင့် region သေချာစစ်ဆေးနည်း dead မဖြစ်အောင်
ကာကွယ်ရှောင်ရှားတင်နည်းများ , FRP Lock ဖြုတ်ခြင်း
Custom Binary Block , bootloop , IMEI fix , TWRP
Myanmar Font , Root ect,,,
အခြေခံ မှ လက်ရှိထွက်နေသော ဆော့ဝဲနည်းပညာ အစုံအလင်
ကို ဆရာ သန်းတိုးအောင် မှ အသေးစိတ်လက်တွေ့ကျကျ
သင်တန်းပြီးဆုံးသွားလဲ Online Group ထည့်ပေးထား
ခြင်းကြောင့် update နည်းပညာများ အဆက်မပျက်ခြင်း
Update DATA များ အချိန်မရွေးအခမဲ့လာရောက်ကူး
နေ့စဉ်သင်ကြားမှု main point များ Video rec လုပ်ထားပေးခြင်း
သင်ကြားမှုတဝက် လက်တွေ့တဝက်ဖြင့် သင်ကြား
၂၇ လမ်း ၆၉ လမ်း နှင့် ၇၀ ကြား
27 Cafe နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်
တိုက် ၂ အခန်း ၄ မန္တလေးမြို့
သင်တန်းကြေး (၂) သိန်း ကျပ်
အချိန် နေ့လယ် (၁၂) နာရီ မှ ညနေ (၄) နာရီထိ
သင်တန်းကာလ (၁) လ
Data 4TB ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
Firmware အစုံ + Movies + Mp3
0941005703 / 09250248011
Than Toe Aung​
Windows 10, မြန်မာဖော့င် No comments
YOTA Phone3( Y3 ) Root + Myanmar Font
Android Root နည်းများ, YOTA, မြန်မာဖော့င် 1 comment
1. Make first usb debugging and OEM unlock on
4. boot twrp image and flash super su SR5
5. root Done
Change with TTA Nougat Font fixer
Xiaomi, မြန်မာဖော့င်2comments
Root + Myanmar Font bat
ယခု root သည် Build No V9.6.5.0 အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်
1.ဖုန်းကို OEM Unlock နှင့် adb on ထားပေးပါ
2.bat ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး 1. နှိပ်ကာ enter ခေါက်ပါ
Mi Pad4Android 8.1 Google App Install
Gapp, google, Xiaomi No comments
Android 8.1 Google App
1. zip ဖိုင်ဖြေချပါ
2. အထဲမှာပါတဲ့ App များကိုတခုချင်းစီသွင်းပါ
3. App များအားလုံး install ပြီးပါက tablet ကို
Hisense Firmware ရေးနည်း ( တင်နည်း )
Firmwares, Hisense, Install Firmware No comments
- Firmware ရေးရန်အတွက် ဖုန်းကို ၈၀ရာခိုင်နှုန်း အထက်အားရှိနေအောင်သွင်းထားပါ။
(မှတ်ချက် - အကယ်၍ ဖုန်းက firmware ပျက်ပြီးတော့ TF Upgrade Fail ဖြစ်နေပြီး အားသွင်းရန်ခက်ခဲနေပါက
ဖုန်းကိုအားသွင်းကြိုးထိုး၍ firmware ရေးပါ။)
- download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ zip ဖိုင်ကို ဖြည်ထုတ်ပြိး အထဲက EG981_v1.bin ကို SD Card ထဲကူးထည့်ပါ။ EG981_v1.bin
ဥပမာ Hisense EG981_v1.bin ဖြစ်နေပါက EG981_v1.bin လို့သာနာမည်ပြောင်းပြီး SD Card ထဲကူးထည့်ပါ
ဖိုင်သည် မည်သည့် folder အောက်မှ မရောက်ရပါ။ SD card ၏ ၀င်ဝင်ခြင်းနေရာမှာရှိရပါမည်။
(SD Card ကို Format ချပြီးထည့်လျှင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။)
- အားလုံးပြည့်စုံသွားပါက SD card ကို ဖုန်းထဲထည့်ပြီး (Vol - ) + (Vol + ) + (Power) ခလုတ် သုံးခုလုံးကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါက
(မှတ်ချက် - Battery အားနည်းပါက လုံးဝ အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။(သို့မဟုတ်) ဖုန်းကို အားသွင်းကြိုးထိုးပြီးရေးပါ။)
Firmware ရေးချိန်သည် အနည်းဆုံး မိနစ်၂၀ ခန့်ကြာနိုင်ပါတယ်။
Upgrade Success ပေါ်လာလျှင် Power ကိုဖိပြီး Device ကို Reboot ချပေးလိုက်ပါ။
Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာရင်တော့ Device ကို Firmware Flashing လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ပြီးမြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Hisense Firmware စုစည်းမှု
Than Toe Aung Mobile Service & Training မှ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါတယ်
2. Advanced ရက်တိုသင်တန်း ( ၃ - ၄ ရက် )
ရက်တိုတိုဖြင့် အခြေခံရှိပြီး update သင်ခန်းစာများကို ထပ်မံသင်ယူလိုသူများအတွက်
Xiaomi + Meizu+ SAMSUNG + Qualcomm + MTK + Windows + OPPO + VIVO
:::::: Mi ခေတ် Qualcomm ခေတ် မှာ ခေတ်နောက်မကျအောင် ::::::
အခြေခံ Firmware တင်နည်းကနေ စလို့ adb fastboot command များပါမကျန် နောက်ဆုံး အကောင့်ဖြုတ် Firmware ကိုယ်တိုင်လုပ်နည်းထိသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။bootloader unlock / twrp / root / custom rom/
အခြေခံမသိသေးသော ၀ါသနာပါသူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
(အားလုံးပဲ MI ခေတ်ရောက်နေပါပြီ MI လာအပ်တိုင်း ဘာလာလာဆွဲစားနိုင်အောင် ရည်ရွယ် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် )
📲📲📲 အကောင့်လော့ကျနေသောဖုန်းများ error ဖြစ်နေသောဖုန်းများ တပါတည်းယူလာနိုင်ပါတယ်။
💪 ဒီအတန်းလေးရဲ့ အားသာချက်ကတော့ သင်နေစဉ်အတွင်း Video Rec လုပ်ထားပေးခြင်းကြောင့် သင်တန်းပြီးဆုံးသွားလဲ ပြန်ပြန်ကြည့်လို့ရခြင်း
> Group အတွင်းသို့ထည့်သွင်းထားပေးခြင်းကြောင့် 100% Online Support ရခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Font ပြန်မပျောက်သွားအောင် မြန်မာ ဖောင့်ထည့်နည်း
ပိုင်ရှင်အစစ်ဆိုရင် မည်သည့် Model မဆို 100% ဖြုတ်နည်း
လော့မကျသေးတဲ့ဖုန်းအား pw မသိလည်း 100% အကောင့်ထွက်နည်း
Bootloader Unlocked ဖုန်းများအား 100% အကောင့်ဖြုတ်နည်းများ
Firmware တင်ရာတွင်ဖြစ်တတ်သော error များ fix ခြင်း (Firmware တင်မရခြင်း)
Mi adb command များ အသုံးပြုပြီး ဖုန်း Model အတိအကျခွဲခြား ခြင်းနှင့် Firmware ဒေါင်းနည်းများ
China to Global Testpoint မထောက်ပဲ ချိန်းနည်း
Windows Driver မကိုက်ခြင်း + Windows Driver ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
China Mi Phone များ Google App များထည့်သွင်းခြင်း
Mi Forum အားဆရာကျကျလှည့်ပတ်ရှာဖွေနည်း
Qualcomm + MTK Network error fix နည်းများ
နှင့် တခြားသင်ခန်းစာပေါင်းများစွာ Video များဖြင့်လည်းကောင်း
MIUI9အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။
၁။ EMMCDL Command များ adb fastboot commands
၂။ imei baseband & networks error fixing
qcn backup restore (Qualcomm)
၃။ nv backup restore ( MTK)*
၄။ Mi Account Unlock Method 2
၅။ Mi Account Unlock Method 3
၆။ Mi Account Unlock Method 4
၇။ sensor bt wifi မပျက်စေပဲ အကောင့်ကျော်ခြင်းများ
၈။ testpoint ထောက်နည်းများနှင့် Dead fixing
၉။ Data backup & restore
၁၀။ Model ကို သေချာမှန်ကန်စွာစစ်တတ်စေရန် Model Checking
၁၁။ Firmware တင်ရာတွင် တက်တတ်သော Ping target error , not enough storage error , Send Configure Command error , BROM Error status_sec_img_too_large တို့အားဖြေရှင်းခြင်း
၁၂။ Xiaomi Firmware utilities
၁၃။ Official Bootloader unlock Un Official Bootloader Unlock
၁၄။ Firmware Search & Download Knowledge Accounts
၁၅။ Mi Usedata password remove command
၁၆။ 9008 ၀င်မရသောဖုန်းများ bootloop fixing
၁၇။ Gapp installing Android4567.1.2 ( Mi6& Mi Max2OK)
၁၈။ Unlocked fastboot firmware flashing command & Account remove command
၁၉။ MIUI Forum အတွင်း Tools Tips
၂၀။ test emmc ro or rw
Mi5C ( meri )
Redmi Note 4X ( mido )
Redmi Note4( Qualcomm )
Redmi Note4( MTK ) Nikel
Mi max2( oxygen )
Mi 5x ( tiffany )
Redmi Note 5A ( ugglite )
Redmi Note 5A Prime ( ugg )
Redmi 5A ( riva )
Redmi Note3Pro ( Kenzo ) 100%
Redmi Note3SE ( Kate) 100%
Redmi 4A ( rolex ) 100%
Mi 4S ( aqua )
Mi Mix2( chiron )
MI 1/1S , 2/2S , 2A ,3W 3C , 4W , 4C , 4i
Redmi 1S , 1W ,2, Prime
Redmi note 4G Dual SIM , Single SIM , 3G 1W
Mi Note Pro ( leo )
Redmi Pro ( omega )
Redmi Note4( nikel )
Redmi Note 4X ( nikel_global )
Redmi Note2( hermese ) 100%
Redmi Note3MTK ( hennessy )
၁။ Partition တခုချင်းစီ Backup Restore လုပ်နည်း
၂။ emmcdl command
၃။ Block0 Backup restore
၄။ Fix IMEI Baseband Unknow & Network error
၅။ Rawprogram edit
၆။ write rawprogram via 9008 mode
oppo , vivo , firmware flash , lock remove
၁။ Partition တခုချင်းစီ Backup Restore လုပ်နည်း နှင့် Firmware backup restore
၂။ Netwrok IMEI Baseband fixing
၃။ Flashtool error flashingerror fix
၄။ Partition တခုတည်းကို Format ချခြင်း
၅။ Flashtool driver fix
၆။ Dead မဖြစ်သွားအောင်ကာကွယ်နည်းများ
>>> #Windows ပိုင်းဆိုင်ရာ ᠌
၁။ Windows Stick ပြုလုပ်နည်း
၂။ Windows တင်နည်း
၃။ Windows တင်အပြီး လိုအပ်သော Driver များ မှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်နည်း
၄။ Windows တင်ပြီး သွင်းမရသော Software များ သွင်းရအောင် Fix နည်း နှင့် တခြား Error fixing...
၅။ Download Link များ Leech နည်း Skip ad မကျော်ရအောင်လုပ်နည်း IDM ချိတ်နည်း
Windows update off ( data fix )
( Windows ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းနေသူများအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးပါသည် )
S6 , S7 ,S8 , S8+ FRP (100%)
Note5, Note7, Note 8 (100%)
J1 , J5 , J7 /pro/2015/2016/2017 (100%)
2018 SAMSUNG FRP
#Huawei FRP 2017,2018
အကောင့်လော့ကျနေသောဖုန်းများ error ဖြစ်နေသောဖုန်းများ တပါတည်းယူလာနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ MI ခေတ်ရောက်နေပါပြီ MI လာအပ်တိုင်း ဘာလာလာဆွဲစားနိုင်အောင် ရည်ရွယ် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် )
စာရင်းပေးသွင်းလိုသူများ 09250248011 , 0941005703 သို့ဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။
💰 သင်တန်းကြေး = ( 120,000 ) ကျပ်
🕓 အချိန် = မနက် (၁၀) နာရီ မှ ညနေ (၄) နာရီထိ
💪 ဒီအတန်းလေးရဲ့ အားသာချက်ကတော့
> သင်နေစဉ်အတွင်း Video Rec လုပ်ထားပေးခြင်းကြောင့် သင်တန်းပြီးဆုံးသွားလဲ ပြန်ပြန်ကြည့်လို့ရခြင်း
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက 1TB HDD DATA +
Mi Account Lock Solution Group သို့ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
💭 ယခင်အတန်း feedback များလေ့လာရန်
25 8 18 YANGON
Jun 1 18 Pakokku
25 May 18 MDY
18 Aug MDY MI Advanced
18 May MDY
18 July MDY
AK Mobile Pathein
Basic to Advanced3Day Class
Yangon Advance 4Day Class
YGN Advanced 4Day Class
YGN MI ADV Nov 29
Basic to Advanced 4Day Class